Sida loo sameeyo saameynta cilladda Photoshop, talaabo talaabo | Abuurista khadka tooska ah
Sida loo sameeyo saameynta cillad ee Photoshop, talaabo talaabo ah
Lola curiel | | dhowr
Xisaabinta, ciladku waa qalad, marka ay jiraan feylal si xun loo duubay ama waxyeello soo gaadhay, sawirro khaldan ayaa la soo saaray oo sababa saamaynta muuqaalkan. Bilicsanaanta "glitch" waxaa hadda laga isticmaalaa adduunka xayeysiinta iyo qaabeynta qaabdhismeedka si aad u siiso dib-u-eegis iyo indho-qabad soo jiidasho leh sawirrada. Casharkaan waxaan ku barayaa sida loo sameeyo saameynta cillad ku timaadda Photoshop dhowr tallaabo oo keliya Ha moogaanin!
1 Diyaarso ilaha lagama maarmaanka u ah abuurista cilladda cillad ku jirta Photoshop
2 Fur sawirka oo nuqul ka samee si aad uga dhigto madow iyo caddaan
3 Nuqul nuqul 1 ah oo jooji kanaalka R ee xulashooyinka isku dhafan ee horumarsan
4 Ku dar hatchka oo ku samee koox lakab ah Photoshop
5 Abuur saamaynta sawirka jabay
Diyaarso ilaha lagama maarmaanka u ah abuurista cilladda cillad ku jirta Photoshop
Kahor intaanan bilaabin, aan aragno waxaad u baahan doonto inaad raacdo casharradan: marka hore waxaad u baahan doontaa sawirka taas oo aad rabto inaad ku dabaqdo saameynta iyo qaab khadadka siman ee madow iyo caddaan ah, waxaad kala soo bixi kartaa bangiga sawir kasta, midka aan isticmaalay waa ka pixaby.
Fur sawirka oo nuqul ka samee si aad uga dhigto madow iyo caddaan
Waxaan u soconaa fur sawirka marka hore waanan soo koobi doonaa. Waxaan ku dhejin doonaa lakabkan cusub madow iyo caddaan, waxaa jira laba qaab oo loo sameeyo:
Hal ikhtiyaar ayaa ah inaad tagto tabka "sawirka", ee ku yaal liiska kore, tag "setinka" oo guji "desaturate".
Midda kale waa tag "sawirka"> "goobaha" oo guji "madow iyo caddaan".
Xaaladdan oo kale waxaan kugula talinayaa inaad u sameyso habka labaad, maxaa yeelay waa midka kan kuu ogolaanayaa inaad astaysto madow iyo caddaan. Si loo dalbado saameynta cilladda, way fiicantahay haddii sawirku leeyahay taariikh mugdi ah, sidaa darteed xoogaa waan hoos u dhigay heerarka casaanka, jaallaha iyo cyanka ah.
Nuqul nuqul 1 ah oo jooji kanaalka R ee xulashooyinka isku dhafan ee horumarsan
Waxaan nuqufin doonaa lakabkan cusub (lakabka 1) (abuurista lakabka 2). samee midig guji "lakabka 2" iyo liiska soo bixi doona guji xulashooyinka isku dhafka ah. Daaqad ayaa furi doonta, hel qaybta ay ku qoran tahay "Isugeyn heer sare ah". Halkaas, dami kanaalka R. Hadda, qalabka guurista, ugu dhaqaaq "lakabka 2" wax yar bidixda.
Ku dar hatchka oo ku samee koox lakab ah Photoshop
Waa waqtigii ku dar hatch. U jiid shaashadda iyo dib u cabir sawirka si aad ugu haboonaato sawir. Markaad hagaajiso, beddel kan qaab isku qasid "iskudhaf ah". Tallaabada xigta waxay noqon doontaa mugdi hooseeya lakabkaan. Waxaan uga tegayaa 30%, laakiin maahan qiima sax ah, ku hagaaji sida aad jeceshahay.
Haddii aadan ku qancin halka ay xarriiqda ka dhacayaan, waxaad had iyo jeer dhaqaajin kartaa lakabka "raster" oo leh qalab dhaqaaq ama amar + T (Mac) ama xakameyn + T (Windows) ah. Iyadoo lakabyada oo dhan in aan ilaa hadda hayno, marka laga reebo asalka, waxaan abuuri doonnaa koox. Si aad ugu abuurto koox lakabyo ah Adobe Photoshop, hoos u dhig fureka wareejinta oo dhagsii dhammaan lakabyada aad rabto inaad kooxaysato si aad u xulato. Mar dambe, nooca amarka + G (Mac) ama xakamaynta + G (Windows).
Abuur saamaynta sawirka jabay
Waxaan u soconaa koox nuqul. Dardaaran midig guji nuqulka halkaan hoose waxaan ku xulaneynaa «isu geeyo koox» si loo abuuro lakab keliya. Hal talaabo ayaa noo hartay inaan qaadno. Iyada oo qalabka jir qaab aan qabanno laydi oo dherer iyo cabbir kala duwan leh lakabka aan abuurnay, iyo dhaqaaq qalab (waxaad si fudud u riixi kartaa amarka ama xakamaynta intaad jiideyso), waxaan u dhaqaajin doonnaa iyaga si aan u abuurno "sawir jabay" saamayn. Waad abuuri kartaa inta aad rabto Sideed u aragtaa natiijada ugu dambeysa?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Sida loo sameeyo saameynta cillad ee Photoshop, talaabo talaabo ah
Sidee looga socdaa sawirka ilaa qoraalka